(tonga teto avy amin'ny Kristadelfiana)
Ny Fiangonana Kristadelfiana (avy amin'ny teny Grika hoe "Mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin'i Kristy") dia fiangonana Protestanta kely izay tsy mino ny Trinite.
Misy eo ho eo amin'ny 60.000 ny Kristadelfiana maneran-tany izay misandrahaka amin'ny firenena 120. Ny firenena be mpikambana indrindra dia ny any Angletera (18.000), Aostralia (10.000), Malawi (7.000), Mozambika (5.000) ary Etazonia (5.000). Ny 55.000 amin'ireo dia an'ny "Finamanana Foiben'ny" Kristadelfiana ("Christadelphians"). Misy ihany koa fikambanana kelikely sasantsasany izay tena tsy tia fiovana mihitsy - toy ny "Kristadelfiana amin'ilay Vao Mangiran-dratsy" ("Dawn Christadelphians"), ny "Kristadelfiana amin'ny Làlana Taloha" ("Old Paths Christadelphians") sns, izay an-jatony fotsiny ihany ny mpikambana ao aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_Kristadelfiana&oldid=682241"
Voaova farany tamin'ny 17 Septambra 2013 amin'ny 11:43 ity pejy ity